Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Free nke Coronavirus bụ Mba 15 gụnyere 10 Island Nations
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Comoros • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Kiribati • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lesotho • Marshall Islands Breaking News • Akụkọ Micronesia • Akụkọ Nauru Nauru • Akụkọ North Korea na -agbasa • Akụkọ na -agbasa na Palau • Akụkọ Samoa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Solomon Islands • Akụkọ Tajikistan • Tonga Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Turkmenistan • Akụkọ Tuvalu • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Yemen
Kedu mba ụwa enweghị coronavirus ọzọ - gịnịkwa kpatara ya na GYN WH? Mba 15 dị n'Africa, Eshia, na Pacific Region enweghị ọrịa COVID-19.
Mwepu iche na enweghị njem nlegharị anya nwere ike bụrụ isi maka mba ghara ịbụ onye ọrịa coronavirus na-egbu egbu edekọtara na mba na mpaghara 209.
Site na 1,364,566 a na-akọ banyere ọrịa Coronavirus na ndị nwụrụ 74,697, a ka nwere mba 15 na kọntinent 3 nke ụwa na-ekwughị akụkọ ọ bụla nke nje ahụ na-egbu egbu.
9 nke mba 15 bụ mba agwaetiti dị na Oke Osimiri Pasifik. Ọ nwere ike gosipụta iche dị ka ụzọ kacha mma iji gbochie nje ahụ. Enwere olile anya, ebe di ka Hawaii nwere ike imuta ihe na ya ma kwusi ikwe ka ugbo elu si USmainland ma obu Asia bia.
Fọdụ mba ndị ọzọ gụnyere North Korea, Tajikistan ma ọ bụ Turkmenistan bụ mba ndị a maara dị ka ndị dịpụrụ adịpụ na ndị amabeghị maka njem nlegharị anya.
Ruo ugbu a mba ndị na-esote enweghị COVID-19
ETITI ỌWỤWA ANYANWỤ
Ka agha ụwa na-alụ coronavirus na ọtụtụ mba na-agbachi agbachi, Turkmenistan na-eme mgbako ịgba ịnyịnya ígwè na-eme akara ụbọchị Ahụike Healthwa na Tuesday
Obodo Central Asia na-ekwu na ọ ka nwere ikpe coronavirus efu. Mana anyị enwere ike ịtụkwasị obi na ọnụ ọgụgụ gọọmentị amaara maka mmachi na-enye?